धार्चेमा टेलिफोन सेवा अबरुद्ध | Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper
धार्चेमा टेलिफोन सेवा अबरुद्ध
Published On : ७ भाद्र २०७६, शनिबार ०८:४१
धार्चे गाउँपालिकाको अधिकांस ठाउँमा नेपाल टेलिकमको मोवाइल सेवा अबरुद्ध भएको छ ।
काशीगाउँमा रहेको नेपाल टेलिकमको टावरमा प्राविधिक समस्या आएकाले मोवाइल सेवा अबरुद्ध भएको नेपाल टेलिकम गोरखाले जनाएको छ । ‘टावरमा बिजुलीको समस्या देखिएको छ’ टेलिकम गोरखाका प्रमुख चन्द्रबहादुर श्रेष्ठले भने ‘प्राविधिक रुपमा अध्ययनकै चरणमा छौ । जतिसक्दो छिटो समस्या समाधान गर्नेछौ ।’
सो टावरले काम नगर्दा धार्चे गाउँपालिकाको उहिया बाहेक अरु सबै ठाउँमा मोवाईल सेवा अवरुद्ध भएको उनको भनाई छ । चार दिन यता मोवाइलमा नेटवर्क आउने जाने भैरहेको स्थानीय बासिन्दाले बताएका छन् । दिनमा एक डेढ घन्टा मात्र मोवाइल नेटवर्क आउने गरेको खानीगाउँका शिक्षक दिनेश लामिछानेले जानकारी दिए । बर्षायामको समयमा मोवाईल नेटवर्कले काम नगर्दा पहिरोको जोखिम क्षेत्रमा बसोबास गर्नेहरुले चिन्ता ब्यक्त गरेका छन् ।